BUCKETS Vagadziri uye vanotengesa - China BUCKETS Fekitori
Bonovo Crusher Bucket ndiyo mhinduro yekuvandudza kupwanya zvinodiwa pamabasa emazuva ano. Uchishandisa rakasungirirwa-bhakiti bhakiti crusher, ese marudzi eiyo inert kuputsa zvinhu zvinogona kupwanywa uye kushandiswazve panzvimbo saiti. Maitiro aya anoda michina mishoma, kutakurwa kushoma uye dumpsite mutengo uye mumwe chete anoshanda anobata kupaza kwekubatanidza pamwe nebucket crusher.
Bonovo Kucheka Yakachena Bhaketi yakashandiswa pakudonhedza, kutsvedza, kukora uye mamwe mabasa ekuchenesa nehukuru hukuru uye zvakapetwa kaviri.
Bonovo Skeleton Screening Bucket rinoshandiswa zvakanyanya kuzvinhu zvakasununguka muhurumende, zvekurima, masango, mapurojekiti ekuchengetedza mvura, masikirini saizi anobvuma kugadzirisa zvichienderana nemamiriro ekushanda evatengi.
Bonovo Tilt Ditch Bhaketi rinodzorwa kuchinjisa nesilinda uye kona hombe iri kusvika pamadhigiri makumi mashanu. Yakagadzirirwa kushanda zvakajairika kudhiraivha, kudhizaina uye zvishoma zvinhu kurodha pasina excavator inofamba, iyo inogona kudzora kupfeka kwemuchina uye mafuta kudyiwa.
Bonovo Clamshell Bucket yevanochera ndeyekugadzirisa zvinhu uye kudonhedza.
Yakakamurwa kuva yakajeka, yakajairwa, uye inorema-dhizaini shanduro uye iine yakasimbiswa 360-degree kutenderera, iwo mauniti anowanikwawo kune ekushambadzira mafomu.